Cesc Fabregas oo bixiyay QISH wayn oo ku aadan inuu sii joogayo Chelsea – Gool FM
(London) 20 Feb 2017. Kubbad qaabeeyaha reer Spain ee kooxda Chelsea Cesc Fabregas ayaa bixiyay qish wayn inuu sii joogayo Blues kaddib markii lagu soo bilaabay kulankiisii 100-aad ee kooxda reer London kulankii FA Cup ay 2-0 uga adkaadeen Wolves.
Waxaa sare u sii kacayay qiyaas fikradeedka laga qabo in Fabregas uu isaga tagayo Chelsea xagaagan kaddib markii uu boos joogta ah ka waayay Conte laakiin waxay iminka u muuqataa inuu kooxda sii joogayo kaddib markii uu LIKE saaray war u dhacayay inuu 100 kulan oo kale u safanayo Blues.
“100 kulan oo la igu soo bilaabay Chelsea.” Cesc ayaa sidaa ku soo qoray boggiisa Instagram.
Waxaa durba u soo hambalyeeyay xiddigaha Chelsea uu ugu horreeyay Kabtan John Terry, balse Fabregas ayaa like saaray Comment laga soo bixiyay qoraalkii uu soo dhigay kaa oo u dhacayay:
“Ma sugi karo ugu yaraan 100 kulan oo kale oo Chelsea u safato,”. Arrinkaan ayaana laga dhadhaminayaa in Fabregas uu doonayo inuu kooxda la sii joogo xagaaga soo socda.
Kooxda usbuuca ee FA Cup oo la soo saaray